About Us - Zhejiang Chuan Yang Ifenisha Co., Ltd.
ChuanYang Ifenisha angathanda inkonzo isisetshenziswa sakho egcwele izinga Upholstery umile ifenisha! Sinikeza ezihlukahlukene inhlanganisela futhi intengo amaphuzu ukuze ivumelane izidingo zakho. Iqembu lethu esiphezulu uzibophezele ekuhlinzekeni ukubaluleka phambili kubhizinisi.
-With engaphezu kwengu-30 nakho kuhlanganiswe embonini Upholstery ifenisha.
-With phezu 70,000 square metres yokukhiqiza izindawo elise Haining, China.
-With kuka-400 abasebenzi abanolwazi, zihlanganisa 8 PDs futhi 10 QC.
-With iziqukathi angaphezu kuka-250 yokukhiqiza nebasebenti njalo ngenyanga.
International nomkhiqizi izinga global ukwabelana emhlabeni-class of ifenisha upholstered
ChuanYang ungumnikazi ukukhiqizwa umugqa eziphambili SOFAS upholstered futhi umugqa ukukhiqizwa isipanji emhlabeni.
Super emikhulu lokuphatha ukukhiqiza sesimanje workshop futhi imishini othomathikhi ukukhiqizwa kwenza ChuanYang ukuba inkampani Umhlaba-class. Isisekelo olukhulu ChuanYang kudala umkhiqizo unqambothi kanye aphakeme lokuphatha ukukhiqiza uhlelo, "ChuanYang" kuzoba ngaphezulu nabadumile ngaphezulu, ChuanYang ifektri iyokhula ibe umsebenzi.
ChuanYang ifenisha okwandisa ulwazi ngomkhiqizo nedumela ngenxa izinga okusezingeni
Imikhiqizo, umongo ubuchwepheshe ehamba phambili, isevisi unqambothi,
ukusebenza ibhizinisi okwandayo, futhi umoya yokudala, abo kukhona isici ezimbili ezibaluleke kakhulu ngokuba ukuhola China ukukhiqiza, kokuba iqembu elikhulu kanye nomsebenzi ithimba ephelele.
Zhejiang ChuanYang okusha Material Co., Ltd. eyasungulwa ngo-1986, itholakala yokungcebeleka edume olwandle, China usofa ukuthekelisa isisekelo ---- Zhejiang Haining Yanguan industril epaki; lo uphiko ngokuphelele ngabanikazi - Zhejiang ChuanYang Ifenisha Co., Ltd. yasungulwa ngo-2006, ChuanYang ifenisha manje useyiNkosi design, ukukhiqizwa, yokuthengisa and service kwelinye ikhaya ibhizinisi elikhulu lesimanje esibanzi, ingenye upholstered umholi ifenisha umkhakha China sika, ingenye amabhizinisi ukhiye zokuthumela usofa Chinese. Okwamanje isisebenzi abangaphezu kuka-600, esehlanganise abevile 83,000 square metres, endaweni ukwakhiwa imayelana 95.000 metres square, yokuthengisa Isamba angaphezu kwezigidi ezingu-350, ChuanYang furniture.has kusungulwa ububanzi yokuthengisa inethiwekhi imikhiqizo akuzona kuphela ethandwa kule lwasekhaya , kodwa futhi zithunyelwe United States, eCanada, e-United Kingdom, e-Ireland, i-Australia, eNingizimu Afrika kanye inqwaba kwamanye amazwe kanye nezifunda.
Ultimate induduzo isipiliyoni
ChuanYang owethulwa izitayela ezahlukene imikhiqizo ekugcwaliseni ukunambitheka zonke yekhasimende, kanye ezihlukahlukene imibala
nezinketho sici ukumisa. Chuan Yang, bazifake induduzo.
NO.5 Rd.4, Guodian Industrial Park, Yanguan Town, Haining Idolobha, Isifundazwe Zhejiang.
Isikhumba Sectional recliner Sofa , Isikhumba recliner Chair Sofa, Sectional recliner Sofa , 3 seater recliner Chair Sofa ,